အဆုတ် ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဂျင်းနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ - CeleLove
လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ အဆုတ် လည်း ပါဝင်နေပါတယ် …. ။ဒါ့ကြောင့် အဆုတ် ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးပြီး အဆုတ် ကို သန့်စင်အောင် ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ် …. ။အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ် သောက်တတ်သူတွေဆိုရင် အဆုတ် ကို သတိထားပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးသင့်ပါတယ် ….. ။
ဂျင်းကို အသုံးပြုပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က တွေ့ရှခဲ့တဲ့ သုတေသနအရ ဂျင်းမှာ အဆုတ်ကင်ဆာ ရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ….. ။
အဆုတ်ကို သန့်ှရှင်းဖို့ ဂျင်းရေနွေးကြမ်း
မီးဖိုပေါ်မှာ ရေနွေးကို ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဂျင်းကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းစာလောက်ကို ရေနွေး ၁ ခွက်ခွဲစာလောက်ထဲ ခပ်လိုက်ပါ ….. ။၅ မိနစ်ကနေ ၁၀ မိနစ်ကြားလောက် ထားလိုက်ပါ …. ။ဂျင်းတွေ ဖယ်လိုက်ပြီး သံပုရာ သီးလေး အနည်းငယ်ညှစ်ပြီး သောက်လိုက်ပါ ….. ။ဟင်းချက်တိုင်းလည်း ဂျင်းကိုထည့်ပြီး ချက်ပြုတ်ပေးပါ ….. ။ဒီလို နည်းလမ်းတွေက ကိုယ်ခံအားကို တက်စေပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ် ….. ။
မှတ်ချက်။ …. ။ သွေးတိုးရှိသူတွေ၊ နှလုံးရောဂါ ရှိသူတွေကတော့ ဂျင်းကို အလွန်အကျွံမစားသင့်ပါဘူး နော် …. ။
လူတဈယောကျ အသကျရှငျဖို့အတှကျ အရေးကွီးတဲ့ အင်ျဂါ အစိတျအပိုငျးတှထေဲမှာ အဆုတျ လညျး ပါဝငျနပေါတယျ …. ။ဒါ့ကွောငျ့ အဆုတျ ကနျြးမာရေးက အရေးကွီးပွီး အဆုတျ ကို သနျ့စငျအောငျ ထားရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ …. ။အထူးသဖွငျ့ ဆေးလိပျ သောကျတတျသူတှဆေိုရငျ အဆုတျ ကို သတိထားပွီး အဆုတျထဲက အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားပေးသငျ့ပါတယျ ….. ။
ဂငျြးကို အသုံးပွုပွီး အဆုတျထဲက အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားနိုငျပါတယျ။ ၂၀၁၂ ခုနှဈက တှရှေ့ခဲ့တဲ့ သုတသေနအရ ဂငျြးမှာ အဆုတျကငျဆာ ရောဂါကိုလညျး ကာကှယျနိုငျစှမျးရှိပါတယျ ….. ။
အဆုတျကို သနျှ့ရှငျးဖို့ ဂငျြးရနှေေးကွမျး
မီးဖိုပျေါမှာ ရနှေေးကို ပှကျပှကျဆူအောငျ တညျလိုကျပါ။ ပွီးရငျ ဂငျြးကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျးစာလောကျကို ရနှေေး ၁ ခှကျခှဲစာလောကျထဲ ခပျလိုကျပါ ….. ။၅ မိနဈကနေ ၁၀ မိနဈကွားလောကျ ထားလိုကျပါ …. ။ဂငျြးတှေ ဖယျလိုကျပွီး သံပုရာ သီးလေး အနညျးငယျညှဈပွီး သောကျလိုကျပါ ….. ။ဟငျးခကျြတိုငျးလညျး ဂငျြးကိုထညျ့ပွီး ခကျြပွုတျပေးပါ ….. ။ဒီလို နညျးလမျးတှကေ ကိုယျခံအားကို တကျစပွေီး အဆုတျထဲက အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ ….. ။
မှတျခကျြ။ …. ။ သှေးတိုးရှိသူတှေ၊ နှလုံးရောဂါ ရှိသူတှကေတော့ ဂငျြးကို အလှနျအကြှံမစားသငျ့ပါဘူး နျော …. ။
တစ်လ​လောက် နှာခေါင်းသွေးယိုနေတဲ့သူ ဆေးခန်းရောက်လာလို့ သေချာကြည့်လိုက်သောအခါ(Video)